Madaxweyne Xasan Sheekh Sidee Buu Ka Yeeli Doonaa Ballanqaadyadii uu Sameeyay Doorashada Ka Hor? | Somali - Diaspora
Muqdisho (Moment Media Group) Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan ka fekeraya wixii uu ka yeeli lahaa ballanqaadyo culus oo uu si hoose ula galay qaar ka mid ah siyaasiyiintii isaga ku taageeray ololihiisa doorashada madaxtinimada ka hor intii uusan ku guuleysan kursiga ugu sareeya hogaanka dalka / , kuwaasoo ay tahay inuu go’aan ka gaaro si dhakhso leh.
Maalmihii u dambeeyay ayaa xafiiska madaxweynaha waxaa si xoog leh ugu soo laalaabanayey siyaasiyiinta u ololeeya maamul goboleedka Banaadir State oo ah maamul bishii Maarso ee sanadkan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho hase yeeshee dawladii kumeelgaarka ahayd aysan aqoonsanin. U dhaqdhaqaaqayaasha Banaadir State ayaa ku gorgortamaya in hadda la joogo xilligii uu madaxweyne Xasan Sheekh u soo gudi lahaa “deyntii siyaasadeed ee ay siiyeen” sida ay Moment Media Group ka soo xiganeyso xubno ka mid ah maamulka Banaadir State, waxa ugu weyna ay tahay inuu aqbalo jiritaanka maamul goboleedkooda oo ka hoos dhisan dawlada federaalka ee degan Muqdisho. [DAAWO SAWIRO Dhismaha Banaadir State
“Madaxweyne Xasan Sheekh xilligii ololihiisa anaga waxaan ku siinay garab weyn, baarlamaanka dhexdiisana waxaan ahayn kooxdii ugu horeysay ee codkooda siiyey marka maanta looga fadhiyaa inuu ama na xusuusto ama na aqoonsan waayo..” sidaasi waxaa Moment Media Group u sheegay mid ka mid ah xubnaha maamulka oo xalay xarunta madaxtooyada kula soo kulmay madaxweyne Xasan Sheekh.
Hogaanka iyo ragga u dhaqdhaqaaqa maamulka Banaadir State ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynaha cusub sida Moment Media Group uu u sheegay afhayeenka Banaadir State.
Waxaa sida muuqata jirta xasaasiyad weyn oo laga qabo dhul ahaan deegaanada uu sheegto maamulkan, oo ka kooban saddexda gobol ee kala ah Banaadir, Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose. Dooda ugu weyna waxay tahay sida caasimada Muqdisho oo marna ah gobolka Banaadir xaruna u ah dawlada dhexe ay u noqoneyso maamul goboleed- waa su’aal u muuqata mid culus. Isla arinmtan ayay ahayd midii keentay in madaxweynihii hore Sheekh Shariif uu irdaha ka xirto siyaasiyiinta Banaadir State hindistay!. Moment Media Group waxay ogaatay in la taliyaasha madaxweyne Xasan Sheekh aysan ku qanacsaneyn hindisaha ah in Banaadir ay ku darsadaan maamulka Banaadir State (xitaa haddii dawladu taageerto maamulkooda) laakiin taasi ma aqbalayaan siyaasiyiinta hogaaminaya maamulkan oo deegaan ahaan ka soo jeeda Muqdisho? (AKHRI DKMG OO DIIDAY BANAADIR STATE )
Madaxweynaha maamulka Banaadir State Maxamed C/raxmaan Cali “Siiriin” oo dhowaan Moment Media Group la hadlay ayaa ku dooday inuusan ogeyn sabab loogu diido maamulkiisa saddexda gobol ee uu sheeganayo isla markaana uu qabo in maamulkiisu uu kaabe u yahay dawlada dhexe ee habka federaalka ku saleysan.
Aqbalaada iyo diidmada Banaadir State waa xujo adag oo madaxweyne Xasan Sheekh laga rabo inuu furo. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isaguna dhankiisa ka dhisaya maamul goboleed uu ku magacaabay “Koonfur Galbeed” [ WARBIXIN (AKHRI WARBIXIN HORE) ka kooban lix gobol oo kala ah; Gedo, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay, Bakool iyo Shabeelaha Dhexe oo ah Banaadir State sheeganeyso.Markaasi haddii dawlada dhexe ay sharciyeyso Banaadir State waxaa iyaguna weelashooda soo hoorsan doona siyaasiyiita kale ee maamul goboleedyada kala magacyada faraha badan wata.
Who is Advising the New Somali President? Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka biya diiday qorshe Culus oo ka yimid kooxda uu kamid yahay ee Dhiiga Cusub